Petra (Carabiga: البتراء, Al-Batrā; Giriigga hore: Πέτρα), oo markii hore loo yaqaanay dadka deggan Raqmu, waa magaalo taariikheed iyo arkale oo ku yaal koonfurta Jordan. Petra ayaa ku taala jasiiradda Jabal Al-Madbah oo ku taala xeebta dhexdeeda kaas oo abuuray dooxada bariga ee dooxada Arabah oo ka socota Badda Dhimashada ee Gacanka Cadaba. Petra waxa la rumeeysan yahay in la dejiyey horaantii 9,000 BC, waxaana laga yaabaa in la aasaasay qarnigii 4aad ee BC oo ah magaalada caasimadda ah ee Nabataean. Nabataeans waxay ahaayeen caruur reer miyi ah oo maal gashaday Petra u dhowaanshaha waddooyinka ganacsiga iyada oo loo asaasay xarun ganacsi oo waaweyn oo ganacsi.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Petra-Nabataean&oldid=219426"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 13 Oktoobar 2021, marka ee eheed 07:07.